Gịnị bụ iru mmiri na mkpa ọ dị na ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Mkpa iru mmiri dị na ihu igwe
Iru mmiri bụ ezigbo ihe dị mkpa gbasara ihu igwe n'ihi Alụlụụ mmiri dị na ikuku anyị. N'agbanyeghị ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku anyị na-eku ume, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nwere mgbe ụfọdụ alụlụ mmiri. Anyị ejirila ịhụ iru mmiri ọkachasị n'oge ụbọchị oyi kacha atụ.
Mmiri bụ otu n’ime ihe ndị dị na mbara igwe ma nwee ike ịchọta ya na steeti atọ (gas, liquid, and solid). N’isiokwu a aga m akọwa ihe niile ị chọrọ ịma gbasara iru mmiri dịka ihe na-agbanwe ihu igwe na ihe ọ bụ. Want chọrọ ịmatakwu banyere ya?
1 Gịnị bụ iru mmiri? Ofdị iru mmiri
2 Kedu mgbe ikuku ikuku na-ejupụta?
3 Kedụ ka anyị ga - esi nwee ike zuru oke ikuku?
4 Kedu ihe kpatara windo ụgbọ ala na-akwụ elu na olee otu anyị ga-esi wepu ya?
5 Kedu otu esi atụ iru mmiri na evaporation?
Gịnị bụ iru mmiri? Ofdị iru mmiri
Iru mmiri bụ oke mmiri mmiri na ikuku. Ego a anaghị adịgide, kama ọ ga-adabere n'ụdị dị iche iche, dịka ma ọ bụrụ na mmiri zoo n'oge na-adịbeghị anya, ọ bụrụ na anyị nọ nso n'oké osimiri, ọ bụrụ na enwere osisi, wdg. Ọ dabere na ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku. Nke ahụ bụ, ka ikuku na-ebelata okpomọkụ ya ọ nwere ike ijide alụlụụ mmiri na ọ bụ ya mere igwe ojii na-apụta mgbe anyị na-eku ume, ma ọ bụ igirigi n'abalị. Ikuku na-ejupụta na alụlụ mmiri ma enweghị ike ijide ihe dị ukwuu, ya mere mmiri ahụ na-aghọ mmiri mmiri ọzọ.
Ọ na-achọ ịmata etu ikuku ọzara nwere ike ijigide iru mmiri karịa ikuku polar, n'ihi na ikuku na-ekpo ọkụ adịghị ngwa ngwa jupụtara na vepo mmiri ma nwee ike ịnwe ọtụtụ, na-enweghị ya ịghọ mmiri mmiri.
E nwere ọtụtụ ụzọ iji zoo aka maka ọdịnaya mmiri dị na mbara igwe:
Zuru oke iru mmiri: uka nke alụlụụ mmiri, na gram, dị n'ime 1m3 nke ikuku ikuku.
Iru mmiri: uka mmiri vepo, na grams, ẹdude ke 1 n'arọ nke ikuku.
Rebe agwakọta: uka nke mmiri vepo, na gram, na 1 n'arọ nke ikuku ikuku.
Otú ọ dị, a na-akpọ ihe kachasị eji iru mmiri eme ihe RH, nke egosiri dị ka pasent (%). A na - enweta ya n'ihi nkewa n'etiti oke ikuku nke ikuku ikuku na ikike nchekwa ya kachasị na ịbawanye ya na 100. Ọ bụ ihe m kwuru na mbụ, ka ọkụ ọkụ ikuku ikuku nwee, karịa okpomọkụ ọ nwere ike ijide ọzọ alụlụ mmiri, ya mere iru mmiri ya nwere ike ịdị elu.
Kedu mgbe ikuku ikuku na-ejupụta?
Ikike kachasị ijide mmiri mmiri ka akpọrọ saturating vepo vapo. Uru a na - egosi ike kachasị mmiri mmiri nke ikuku ikuku nwere ike ịnwe tupu ọ ghọọ mmiri mmiri.
N'ihi iru mmiri ahụ, anyị nwere ike ịmata otu ikuku ikuku dị nso iji ruo saturation ya, yabụ, ụbọchị anyị nụrụ na iru mmiri ahụ bụ 100% na-agwa anyị na ikuku ikuku adịkwaghị. nwere ike ịchekwa vapo mmiri ọzọ wee si ebe ahụ, ọzọ mmiri agbakwunye na ikuku ikuku ga-etolite ụmụ irighiri mmiri (nke a maara dị ka igirigi) ma ọ bụ kristal ice, dabere na ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Dị ka ọ na-adị, nke a na-eme mgbe ikuku ikuku dị ezigbo ala ma ọ bụ ya mere na ọ nweghị ike ijide alụlụ mmiri ọzọ. Ka okpomọkụ nke ikuku na-abawanye, ọ nwere ike ijide alụlụ mmiri na-enweghị afọ ojuju na ọ bụ ya mere na ọ naghị emepụta ụmụ irighiri mmiri.
Dịka ọmụmaatụ, na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri, n'oge ọkọchị, nnukwu mmiri na okpomọkụ "na-adọrọ adọrọ" n'ihi na mmiri mmiri na ebili mmiri na ụbọchị ikuku. Agbanyeghị, n'ihi oke okpomọkụ ya, enweghị ike ịmepụta mmiri mmiri ma ọ bụ jupụta, ebe ọ bụ na ikuku nwere ike ịchekwa ọtụtụ alụlụ mmiri. Ọ bụ ya mere igirigi anaghị eto n’oge ọkọchị.
Kedụ ka anyị ga - esi nwee ike zuru oke ikuku?
Iji ghọta nke a n’ụzọ ziri ezi, anyị ga - eche mgbe anyị na - apị alụlụ mmiri site n’ọnụ anyị n’oge abalị oyi. Ikuku ahụ anyị na-ekuru mgbe anyị na-eku ume nwere ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ ụfọdụ na alụlụụ mmiri. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ hapụ ọnụ anyị ma metụta ikuku oyi n'èzí, ọnọdụ okpomọkụ ya na-ada nke ukwuu. N'ihi ịjụ oyi ya, ikuku ikuku na-efunahụ ikike ịnwe alụlụụ, ngwa ngwa iru saturation. Alulu mmiri ahụ na-abanyezi ma na-eme alụlụ.
Ọzọkwa, m na-eme ka ọ pụta ìhè na nke a bụ otu usoro nke igirigi nke na-eme ka ụgbọ ala anyị na-etolite n'abalị oyi oyi. Ya mere, a na-akpọ ọnọdụ okpomọkụ nke igwe ikuku ga-ajụ oyi iji mepụta odide, na-enweghị agbanwe ọdịnaya ya, ma a na-akpọ ya igirigi ma ọ bụ igirigi.
Kedu ihe kpatara windo ụgbọ ala na-akwụ elu na olee otu anyị ga-esi wepu ya?
Iji dozie nsogbu a nke nwere ike ịdakwasị anyị n'oge oyi, ọkachasị n'abalị na ụbọchị mmiri ozuzo, anyị kwesịrị iche echiche gbasara saturation ikuku. Mgbe anyị bara n'ime ụgbọ ala ma si n'okporo ámá pụta, mmiri mmiri nke ụgbọ ahụ na-amalite ito ka anyị na-eku ume na, n'ihi obere okpomọkụ ya, ọ na-eju afọ ngwa ngwa (iru mmiri ya ruru 100%) Mgbe ikuku dị n'ime ụgbọ ala ahụ jupụta, ọ na-eme ka windo na-efe efe n'ihi na ikuku enweghi ike ijikwa alụlụ mmiri ọzọ, mana anyị na-aga n'ihu na-eku ume ma na-ekpopụkwu alụlụ mmiri. Ọ bụ ya mere ikuku ji jupụta na njupụta niile na-agbanwe mmiri mmiri.
Nke a na - eme n'ihi na anyị edobela ikuku ikuku oge niile, mana anyị agbakwunyela ọtụtụ alụlụ mmiri. Kedụ ka anyị nwere ike isi dozie nke a ma ghara ibute ihe ọghọm n'ihi ọhụhụ dị ala nke iko iko ahụ? Anyị ga-eji kpo oku. Iji kpo oku ma na-eduzi ya na kristal, Anyị ga-eme ka ọnọdụ ikuku nke ikuku bawanye, na-eme ka o kwe ya omume ịchekwa alụlụ mmiri na-enweghị afọ ojuju. N'ụzọ dị otú a, windo ndị ahụ na-adịghị anya ga-apụ n'anya ma anyị nwere ike ịkwọ ụgbọala nke ọma, na-enweghị ihe egwu ọ bụla.
Kedu otu esi atụ iru mmiri na evaporation?
A na-ejikarị ngwá ọrụ akpọ psychrometer amata iru mmiri. Nke a nwere temometa abụọ ha nhata, nke otu n'ime ha, nke a na-akpọ "temometa akọrọ", ka a na-eji naanị iji nweta okpomọkụ nke ikuku. Nke ọzọ, nke akpọrọ "temometa mmiri mmiri", nwere ọdọ mmiri kpuchie yana webụ mmiri site na wick nke na-etinye ya na mmiri mmiri. Ọrụ ahụ dị nnọọ mfe: mmiri nke na-agbanye weebụ na-ekpochapụ ma maka nke a ọ na-ewe okpomọkụ site na ikuku gbara ya gburugburu, nke ọnọdụ okpomọkụ ya na-amalite ịda. Dabere na ọnọdụ okpomọkụ na ọdịnaya izipu mbụ nke ikuku ikuku, ọnụọgụ nke mmiri evaporated ga-adị ukwuu ma ọ bụ na-erughị ya ma ruo n’otu ogo a ga-enwe nnukwu mmiri ma ọ bụ peepe na okpomọkụ nke temometa mmiri ahụ. Dabere na ụkpụrụ abụọ a, a na-agbakọ iru mmiri a na-eji usoro mgbakọ na mwepụ metụtara ha. Maka mma dị ukwuu, a na-enye temometa na tebụl ntinye abụọ nke na-enye uru iru mmiri ahụ dị oke ọnụ site na okpomọkụ nke temometa abụọ ahụ, na-enweghị ime atụmatụ ọ bụla.
Enwere ngwaọrụ ọzọ, nke ziri ezi karịa nke gara aga, nke a na-akpọ aspyropsychrometer, nke obere igwe na-eme ka o doo anya na thermometers na-aga n'ihu.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, mgbe a bịara n'ihe banyere ihu igwe na sayensị ihu igwe, iru mmiri dị ezigbo mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mkpa iru mmiri dị na ihu igwe
Ọmarịcha edemede nkọwa, ana m ekele gị maka ọrụ ị na-arụ, ekele ..
Zaghachi José Alberto
Raul Santillan dijo
Edemede mara mma nke German Portillo, ị maara ka iru mmiri dị na ngwaahịa sitere na kaadiboodu ma ọ bụ akwụkwọ nwere ike ịmịkọrọ?
Ma ọ bụ ọ bụrụ na enweghị ike iwepụ ya, belata iru mmiri%!
Zaghachi Raul Santillan
Ihe akaebe nke ịdị adị nke mgbanwe ihu igwe
Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ nwere ike ịkwụsị?